Guddoomiye Jawaari oo sheegay in shirka Madasha uu furmi doono 22-ka bishan. | RADIO Haatuf
Home / WARARKA MAANTA / Guddoomiye Jawaari oo sheegay in shirka Madasha uu furmi doono 22-ka bishan.
Guddoomiye Jawaari oo sheegay in shirka Madasha uu furmi doono 22-ka bishan.
OgaalFM- Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ku sugan magaalada Baydhabo ayaa sheegay in maalinta Arbacada oo ku beegan 22-ka bishan June uu si rasmi ah u furmi doono Shirka Hoggaamiyeyaasha Madasha Wada-tashiga Qaran.
Shirkan oo la filayay inuu furmo maalinta berri oo ku beegan 20-ka bisha June ayaa arrimo farsamo dib ugu dhacay, iyadoo labada maalmood ee soo socota lagu wado in Madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay gaaraan Baydhabo.
Guddoomiye Jawaari oo Madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada uga sii horeeyay Baydhabo, ayaa u kuur galayay sida ay u socoto qaban qaabada iyo diyaar garowga shirka, iyadoo kulamo la qaatay Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Koofur Galbeed iyo qeybaha bulshada.
“Shirka Madasha wada-tashiga qaran wuxuu si rasmi u furmi doonaa maalinta Arbacada oo taariikhda ku beegan 22-ka bishan June”ayuu yiri Guddoomiye Jawaari.
Shirka ayaa lagu wadaa in lagu dhameystiro go’aanadii ka soo baxay shirkii Madasha wada-tashiga qaran ee horaantii bishan lagu soo gaba gabeeyay magaalada Muqdisho.
Magaalada Baydhabo oo xarun KMG u ah Maamulka Koofur Galbeed ayaa noqoneysa markii u horeysay ee lagu qaban doono shirka Madasha Wada-tashiga Qaran, iyadoo horay loogu qabtay Kismaayo, Muqdisho iyo Garowe.
Previous: Madaxweynaha oo xarigga ka jaray Terminal cusub oo loo sameeyay Dekeda Muqdisho (Sawirro).
Next: Ban Ki-moon oo booqday qaxooti ku sugan Jaziirad ku taal Gariiga (Sawirro).